Ruby Bhora Makesi - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Ruby Bhora Makesi)
Ruby hafu yebhora lenzi
Ruby mbishi zvinhu zvinorimwa mufekitori nekunyungudutsa ultra yakachena Al2O3 pakushisa kwakakwirira ipapo 2000 deg. Celcius kugadzira kristaro imwe chete. Ichi chinhu chakaomarara chinokwanisa kukwenenzverwa kune yakanaka kwazvo nzvimbo yekupedzisira. Half Ball lenses anoshandiswa zvakanyanya pane fiber kutaurirana,...
Muenzaniso Nha.: RP-D15S
Muenzaniso Nha.: RP-RS
Iyo lens yebhora chinhu chakakosha cheanopisa chinhu chinoshandiswa kugadzirisa chiratidzo chinobatanidza pakati pefibre, iyo inotepfenyurisa uye detector. Uye zvakare, inokodzerawo kunyorera senge endoscopy, barcode scanning, aspheric lens yekugadzirisa zvinhu uye maseru. Iyo lens yebhora inogadzirwa neyegirazi...
Muenzaniso Nha.: RP-S8
Muenzaniso Nha.: RP-D10
Iyo Refractive indekisi yesafiri ndeye 1.760 iyo inoita kuti inakidze kwazvo kushandiswa sesafire Bhora lens yezvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi. Pamusoro peiyo optical zvinhu zveSafiri, zvakare inopfeka inodzivirira uye inogona kumira yakasimba kukora kwemakemikari. Half Ball lenses anoshandiswa zvakanyanya pane...
Muenzaniso Nha.: RP-FB
Muenzaniso Nha.: RP-D100
N-SF11 ine yakakwira yekuparadzira mwero kupfuura N-BK7, iri ine yakakwira refractive index, yakaderera nhamba yeAbbe uye yakakwira yekuparadzira simba, ichiita kuti ive yakakodzera kwazvo kune maficha anoda akakwirira ekupararira mune inoonekwa mwenje renji. Yayo inomiririra index pa587.6 nm iri 1.785. Tsanangudzo:...
Muenzaniso Nha.: RP-B4
Quartz bhora lens ine yakakwira transmittance pakati pe violet uye infrared wavelength, uye yakaderera yekushisa yekuwedzera coefficient, ichiita sarudzo yakanaka yekudaira bhora lenzi mu ultraviolet, inoonekwa uye padyo-infrared spectroscopy mafomu. Iyo lens yebhora chinhu chakakosha kwazvo chemaw macho...
Muenzaniso Nha.: RP-DZN
Realpoo Optics inogona kupa infrared zvinhu ZnSe Bhora Lens. Tsanangudzo: Chinyorwa: ZnSe Chimiro: Bhora Usage: Manyiminya, Laser, comunication, zvokurapa midziyo Dimameter: 1.6mm Kutenderera: 0.005 Kushivirira: ± 0.005 Pamusoro pemhando: 60/40, 40/20 sctatch uye chera Mamwe dhayamita ndapota taura nesu！
Muenzaniso Nha.: RP-DSH
Yakakwira mhando Sapphire bhora lenzi
Iyo Refractive indekisi yesafiri ndeye 1.760 iyo inoita kuti inakidze kwazvo kushandiswa sesafire Bhora lens yezvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi. Pamusoro peiyo optical zvinhu zveSafiri, zvakare inopfeka inodzivirira uye inogona kumira yakasimba kukora kwemakemikari. Tsanangudzo: Chinyorwa: Sapphire AI203 Chimiro:...
Ruby Bhora Makesi Ruby Bhora Lens Ruby Tarisa Mabheyari Hafu Bhora Lens Quartz Bhora Lens ZnSe Bhora Lens Crystal Bhora lenzi Micro Bhora Lens